ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလေ့လာရေး - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အပြာစာပေနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လေ့လာမှုများကိုဤမိတ်ဆက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ link ၏ရှေ့မှောက်တွင် L (L) သည်ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုညွှန်ပြသည်။ YBOP မှဤသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်သည်။
ပထမဦးစွာလိင်: ရုံအဆိုပါသိပ္ပံ ကျေးဇူးပြု.
ဗီဒီယို: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် High-Speed ​​ကိုအင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ
စာပေနှင့် meta-analysis ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ):
အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2006) - ကောက်နှုတ်ချက်:
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းများ၏စနစ်တကျသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ပါ, သို့သော်, အတော်လေး uncharted နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပြီး system-အာရုံစူးစိုက်သုတေသနပြု၏အလောင်းတော်ကိုကန့်သတ်သည်။ မတည်ရှိပါဘူးသောသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်များစွာသောအနုတ်လက္ခဏာခေတ်ရေစီးကြောင်းထင်ရှားခဲ့သည်။ အများကြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်မိသားစုများအပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မသိရသေးသော်လည်း, မရရှိနိုင်ပါဒေတာများကိုမူဝါဒချမှတ်သူများ, ဆရာ, ဆရာမများ, Clinician နှင့်သုတေသီများများအတွက်အသိပေး Starting Point သို့ပေး။
1 ။ တရားမဝင်သော်လည်း, လူငယ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းရှိသည်နှင့်ဤယိုယွင်းနေ, စိတ်ထိခိုက်ကြမ်းတမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်စွဲလမ်းသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
2 ။ လူငယ်လေ့, ကျရကြောင်းပရိယာယ်, လမ်းလွဲ, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာကြည့်ရှုထဲသို့ "mouse ကိုပိတ်မိနေ" လျက်ရှိသည်။
3 ။ သုတေသနညစ်ညမ်းထိတွေ့လူငယ်များအတွက်တည်မြဲစှဲပါစေနှင့်ဤအထင်အမြင်အများဆုံးမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောရွံရှာ, ထိတ်လန့်, အရှက်, အမျက်ဒေါသ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှင့်ဝမ်းနည်းမှုအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုကို အသုံးပြု. ဖော်ပြထားကြောင်းနိုင်သည်ကိုပြသသည်။
4 ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်တင်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်မှု၏စားသုံးမှုလူငယ်၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးအတွက်မိမိတို့၏အောင်မြင်မှုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
5 ။ လူငယ်အတွက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအဖြစ်စအိုလိင်ဆက်ဆံကြပြီးရင်ခုန်စရာတွေနဲ့စေ့စပ်ကြသည်မဟုတ်လူတို့နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်၏တိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
လူငယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းရင်းများအတွက်တောင်းဆိုချက်ကိုအကဲဖြတ် (2011) - ကောက်နှုတ်ချက်:
လူငယ်များရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုများလေ့လာရေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကာလကြာရှည်သက်သေအထောက်အထားများရှိနေသော်လည်းစုပြုံနှေးခဲ့ကြပြီ။ မြောက်မြားစွာစည်းကမ်းများကိုထံမှသုတေသီများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးပညာသင်ဆု၏ဤအရေးကြီးသောဧရိယာဖြေရှင်းရန်ခေါ်ဆိုမှုဖြေကြားခဲ့ကြသကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာသက်ရောက်မှုရှုခင်းသို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ဤအခနျး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလုပ်၏ဤခန္ဓာကိုယ်တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နိဂုံးချုပ်အပြစ်လွှတ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသက်ရောက်မှုအပေါ်စုဆောင်းလေ့လာချက်များ၏အစိတ်အပိုင်းအစုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွတ်နှင့်မစ္စတာကမ်းဘဲလ် (1979) ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခြများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများကဤရည်မှန်းချက်ပြီးမြောက်ဖို့အလုပ်ခန့်ရှိပါသည်။ ဒါဟာယနေ့အထိသုတေသနတစ်ဦးချင်းစီစံနှုန်းအဘို့သိသိသာသာတံခါးခုံဖြတ်သန်းနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနီးပါးဆက်ဆက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု '' လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်းကိုကောက်ချက်ချသည်။
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012) - နိဂုံးမှ:
ဆယ်ကျော်သက်များအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်လိင်ပညာရေး၊ သင်ယူမှုနှင့်ကြီးထွားမှုအတွက်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်စာပေတွင်တွေ့ရသောအန္တရာယ်၏အန္တရာယ်ကိုသုတေသီများကအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ဤဆက်နွယ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ထိတွေ့မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစေခဲ့သည် စုပေါင်းလေ့လာမှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုသည့်လူငယ်များသည်လက်တွေ့မကျသည့်လိင်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးများနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရခွင့်ပြုထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်စိတ် ၀ င်စားမှုများနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုပုံဖော်ထားသောတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
စာပေများတွင်ဆယ်ကျော်သက်များညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအယူအဆအကြားဆက်စပ်မှုအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။ မိန်းကလေးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ကြည့်ရှုသည့်အမျိုးသမီးများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိမ့်ကျသည်ဟုခံစားကြရသည်။ ယောက်ျားလေးများကမူမီဒီယာတွင်ရှိသောအမျိုးသားများကဲ့သို့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များကလည်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည်ကျဆင်းသွားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအသုံးပြုသောဆယ်ကျော်သက်များ၊ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့ရသောလူမှုရေးပေါင်းစည်းမှုနိမ့်ကျခြင်း၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများတိုးပွားလာခြင်း၊ ဆိုးသွမ်းသောအပြုအမူများမြင့်မားလာခြင်း၊
လိင်စွဲလမ်း၏တစ်ဦးက New Generation အဖွဲ့ (2013) - ပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းနေစဉ်, ဒါကြောင့် "ဂန္" CSB ဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ငယ်ရွယ် compulsive porn အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားရန်ပထမဦးဆုံးစာတမ်းများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ နိဂုံး:
ဒါဟာလိင်ကွဲပြားမှုနှစ်ခုထူးခြားတဲ့ etiologies အားဖြင့်ခွဲခြားစေခြင်းငှါအဆိုပြုထားသည်။ "ခေတ်ပြိုင်" စွဲစွဲလမ်းသူကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရယဉ်ကျေးသောယဉ်ကျေးမှုအတွင်းဂရပ်ဖစ်ဆိုက်ဘာလိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အစောပိုင်းကာလကြာရှည်စွာထိတွေ့မှုသည်ထူးခြားမှုရှိရန်အကြံပြုသည်။ ဂန္ထဝင်စွဲလမ်းမှုကိုစွဲလမ်းသူသည်စိတ်ဒဏ်ရာ၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ -based သိမှတ်ခံစားမှုများနှင့်စိတ်ဝေဒနာ။ နှစ် ဦး စလုံးအလားတူတင်ပြချက်များ (compulsive အပြုအမူ, စိတ်ဓါတ်များမမှန်, relational ချို့ယွင်း) ဝေမျှစေခြင်းငှါနေစဉ်, etiology နှင့်ကုသမှုအချို့ရှုထောငျ့ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အလွန်အခြေအတင်ဆွေးနွေးနေစဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ "ဂန္ထဝင်", အပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်း၌၎င်း, လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှုအတွက်သုတေသနအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုများစွာသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။ ကုသမှု options တွေကိုကျယ်ပြန့်မပေးအနေဖြင့်, စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ "ဂန္" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူအလုပ်အတွက်ကျယ်ပြန့်အရည်အသွေးလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုပင် certified ရရှိထားပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုထုံးလေ့ကျင့်ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားကောက်ယူသောအတိုင်းအတာအထိ, မတူညီနှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များနှင့်“ ခေတ်ပြိုင်” လိင်စွဲလမ်းမှုသည်အသုံးမပြုသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသနနှင့်စာပေများသည်ရှားပါးပြီး၊ စိတ်ဝင်စားစရာမှာအမေရိကန်ပြင်ပရှိနိုင်ငံများမှမကြာခဏထုတ်ဝေသည် (He, Li, Guo, & Jiang, 2010; Yen et al, 2007) ။ အမျိုးသမီးငယ်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းသည်လုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ လိင်စွဲလမ်းမှုအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကုထုံးပညာရှင်များကိုအထူးကုသမှုသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကိစ္စဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများသည်ထိုကဲ့သို့သောအထူးကုသမှုမျိုးလိုအပ်နေပြီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကတုံ့ပြန်ရန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများရှိနေသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ ဦး ရေအငယ်ဆုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုသင့်လျော်စွာဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်သုတေသန၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်ပညာရေးကိုအရေးပေါ်လိုအပ်သည်။
လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မီဒီယာအသစ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှိပါသလား? တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2016) - စိတ္တဇမှ:
ရလဒ်များ: တဆယ်လေးယောက်လေ့လာမှုများ, ဒီဇိုင်းအားလုံး Cross-Section, အပါဝင်စံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ခြောက်လလေ့လာမှုများ (10 352 သင်တန်းသားများကို) SEWs နှင့်ရှစ် (10 429 ပါဝင်သူ) ကိုလူငယ်များရဲ့ထိတွေ့ဆန်းစစ် sexting ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှုနှင့်ရလဒ်ကိုအဓိပ္ပာယ်အတွက်လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာအပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ချုပ်ထိတွေ့ condomless လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့; sexting အစဉ်အဆက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီလိင်ဆက်ဆံခြင်း, မကြာသေးမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရှိခဲ့နှင့်မျိုးစုံမကြာသေးမီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အများစုမှာလေ့လာမှုများအရေးကြီးသောအလားအလာရှက်ကြောက်ဘို့ကန့်သတ်ညှိနှိုင်းမှုရှိခဲ့ပါတယ်။
နိဂုံး: Cross-Section လေ့လာမှုများသစ်ကိုမီဒီယာနှင့်လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ Self-အစီရင်ခံထိတွေ့မှုများအကြားတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အသင်းအဖွဲ့ပြသပါ။ longitudinal လေ့လာမှုများလေ့လာတွေ့ရှိအသင်းအဖွဲ့များအခြေခံသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမ်းကြောင်းသို့ဖွငျ့နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ထိုးထွင်းသိမြင်ဘို့ကိုထိန်းညှိဖို့ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မယ်။
မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015 (2016) - ထိုစိတ္တဇမှ:
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: သုတေသန 20 နှစ်များတစ်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) - ထိုစိတ္တဇမှ:
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်မှန်းချက် peer-ပြန်လည်သုံးသပ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာယင်းပျံ့နှံ့အပေါ် 1995 နှင့် 2015 အကြားဂျာနယ်များ, ခန့်မှန်းနှင့်ညစ်ညမ်း၏မြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုဂယက်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပင်ကိုယ်မူလသုတေသန systematize ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာသုတေသနမြီးကောင်ပေါက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုပြသပေမယ့်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကိုအလွန်ကွဲပြား။ ပိုပြီးမကြာခဏညစ်ညမ်းတဲ့မြီးကောင်ပေါက်, တစ်ဦးထက်ပိုသောအဆင့်မြင့် pubertal ဇာတ်စင်မှာအာရုံခံစားမှုရှာဖွေနေသူအထီး ရှိ. , အားနည်းသို့မဟုတ်စိတ်ပူပန်မိသားစုဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းကျား-ကျပုံစံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တော်မှာခဲ့သည်။ ဒါဟာအစနှစ်ဦးစလုံးကျူးလွန်ခြင်းနှင့်သားကောင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိုလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ဖြစ်ပျက်မှု, ပေါ့ပေါ့လိင်အပြုအမူနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်အတွေ့အကြုံ, နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့သလိုပဲ။
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' သဘောထားနှင့်အပြုအမူအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များ: လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (2017) - ကောက်နှုတ်ချက်:
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' သဘောထားတွေ, ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အပြုအမူတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုဆန်းစစ် longitudinal လေ့လာမှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုကိုအာရုံစိုက်အဆိုပါ longitudinal လေ့လာမှုများတစ်ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ တိုက်ရိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' သဘောထားတွေ, ယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူများ၏အရေအတွက်လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအများအပြားလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောသဘောထားတွေ, ကျား, မ-related ကျပုံစံယုံကြည်ချက်, လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိခိုက်စေသလိုပဲ။
ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမရေရာမှု (Peter & Valkenburg, 2008b)၊ လိင်ဆိုင်ရာမသေချာမရေရာမှုများ (Peter & Valkenburg, 2010a; van Oosten, 2015) စသည့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏သဘောထားနှင့်ယုံကြည်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှု (Peter & Valkenburg, 2009a)၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု (Peter & Valkenburg, 2009b)၊ အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုထားသောလိင်သဘောထားများ (Baams et al ။ , 2014; Brown & L'Engle, 2009; Peter & Valkenburg, 2010b), သာတူညီမျှသောကျားမရေးရာအခန်းကဏ္ att သဘောထားများ (Brown & L'Engle, 2009) နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာစောင့်ကြည့်ခြင်း (Doornwaard et al ။ , 2014) ။
ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ပေါ်ထွက်လာသောအရွယ်ရောက်သူများ၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသဘောထားနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လိင်မီဒီယာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စာပေကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း (2017) - Abstract:
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုချိန်းတွေ့ခြင်း (DV) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု (SV) သည်ပြန့်နှံ့သောပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ ကြီးထွားလာနေသောစာပေများအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာ (SEM) နှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မီဒီယာ (SVM) သည် DV နှင့် SV တို့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ SEM နှင့် SVM နှင့် DV နှင့် SV တို့၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်ထိတွေ့မှုအပေါ်စနစ်တကျနှင့်ပြည့်စုံသောစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်နှင့်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာများကို အသုံးပြု၍ လေ့လာမှုများစုစုပေါင်း ၄၃ ခုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးစုပေါင်းတွေ့ရှိချက်များကဖော်ပြသည် (1) SEM နှင့် SVM ထိတွေ့မှုသည် DV နှင့် SV ဒဏ္myာရီများနှင့် DV နှင့် SV အပေါ်ပိုမိုလက်ခံသောသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ (2) SEM နှင့် SVM ထိတွေ့မှုသည်အမှန်တကယ်နှင့်မျှော်လင့်ထားသည့် DV နှင့် SV သားကောင်ခံရခြင်း၊ (3) SEM နှင့် SVM သည်အမျိုးသား DV နှင့် SV တို့၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများကိုအမျိုးသမီး DV နှင့် SV သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများထက်ပိုမိုပြင်းထန်စွာသက်ရောက်သည်။ နှင့် (4) DV နှင့် SV နှင့်ပတ်သက်။ ရှိပြီးသားသဘောထားများနှင့်မီဒီယာ ဦး စားပေး SEM နှင့် SVM ထိတွေ့မှုနှင့် DV နှင့် SV သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်ဆံရေးအလယ်အလတ်။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည် longitudinal နှင့် experimental ဒီဇိုင်းများကိုအသုံးပြုရန်၊ DV နှင့် SV ရလဒ်များအပေါ် SEM နှင့် SVM ထိတွေ့မှု၏ဖျန်ဖြေသူများနှင့်စောင့်ကြည့်သူများအားစေ့စေ့ဆန်းစစ်ရန်၊ SEM နှင့် SVM ၏သက်ရောက်မှုများကိုအာရုံစိုက်ပြီးအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုအမျိုးသားများထက် ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့သင့်သည်။ မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးပရိုဂရမ်များကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဤအစီအစဉ်များအားထုတ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်လက်ရှိ DV နှင့် SV ကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်များနှင့် တွဲဖက်၍ ။
ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: သုတေသန Trends 2000-2017 ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ (2018) - သုံးစွဲသူအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်သောကဏ္ဍများကနေကောက်နုတ်ချက်:
ဒီစနစ်တကျစာပေပြန်လည်သုံးသပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလယ်ပြင်၌သုတေသနအကျိုးစီးပွား map ဖို့နဲ့ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရလဒ်များကိုသုတေသနအာရုံစိုက်များ၏နယ်မြေများမှပေါ်ထွက်လာကြပါပြီရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
လိင်ဆီသို့သဘောထားများ - ယေဘုယျအား 21 လေ့လာမှုများမှ PU စပ်လျဉ်းလိင်ဆီသို့ဦးတည်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ညစ်ညမ်းပစ္စည်းလောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်အဓိကအားမှ PU စဉ်းစားတစ်ဦးကိုရိပ်မိပုံမှန်သဘောထားနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှသိသိသာသာသက်ရောက်မှုချိတ်ဆက်ပြီ။
ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - အပြန်အလှန်အားကြည့်ရှုညစ်ညမ်းတန်ဖိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်တွေ့ရှိထားသည်နှင့်ပိုပြီးတိတိကျကျသူတို့အားဘာသာတရားဆီသို့ဦးတည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်း။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းကျား၏လွတ်လပ်သော, အချိန်ကျော်မြီးကောင်ပေါက် '' ယာနျဘာသာတရားကိုလျှော့ချတစ် secularizing အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။
သားကောင် - အကြမ်းဖက် / စော်ကားသောညစ်ညမ်းထိတွေ့မှာ-အန္တရာယ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်မြီးကောင်ပေါက်တို့တွင်ဘုံပါပြီပုံနှင့်, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပါကသားကောင်တစ်သမိုင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာအခြားလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုများ၏စိတ်အားထက်သန်ယေဘုယျအားဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မထင်ခဲ့ဘူးတဲ့အသင်းအဖွဲ့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။ ဤအနေသော်လည်းအခြားတွေ့ရှိချက်များခြုံငုံ, PU မှရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားပိုမိုမြင့်မားမူအကျင့်ပြဿနာများ, ပိုမိုမြင့်မားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်သားကောင်နှင့်သိသိသာသာညစ်ညမ်းပုံမှန်ကြည့်ရှုသူနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုယောက်ျားလေးများ '' ကျူးလွန်နှင့်အတူအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်ကျူးလွန်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ညွှန်ပြ။
စိတ်ကျန်းမာရေးလက်ခဏာ - နိဂုံးပိုင်းနှင့်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မှ PU အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အတည်ပြုမဟုတ်အချို့သောလေ့လာမှုတွေရှိနေသော်လည်းတွေ့ရှိချက်များကျယ်ပြန့်အများစု (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားမှ PU စိတ်ခံစားမှုပိုမိုမြင့်မားမှပြန်ပြောပြလေ့ရှိတယ်ကြောင်းပေါ်ပါတယ်ဥပမာ။ စိတ်ကျရောဂါ) နှင့်အမူအကျင့်ပြဿနာများကို။ ကြောင်းလိုင်း, Luder အတွက် et al။ ပိုမိုမြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူတင်ပြယောက်ျားပေါင်းမှ PU နှင့်စိတ်ကျရောဂါသရုပ်အကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်ကျားမ-related မူကွဲအကြံပြုသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးအချက်များဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ဖော် longitudinal လေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူခဲ့သည်။
လူမှုဖြင့်လွှတ်ရန် - ယေဘုယျအားညစ်ညမ်းများအတွက်အင်တာနက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူဆယ်ကျော်သက်, လူမှုရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကနေအများကြီးလူမှုရေးဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကွာခြားလေ့စေတဲ့သဘောတူညီမှုဖြစ်ရှိပုံရသည်။
အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုလက်ခဏာ - အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်တွင်ထည့်သွင်းအဆိုပါ 15 လေ့လာမှုများထဲက 57 အတွက်သုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းနိုင်အောင်သားကောင်ထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဘုံဝိသေသလက္ခဏာများအွန်လိုင်းပိုမိုမြင့်မားအွန်လိုင်းဂိမ်းအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်, အင်တာနက်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတို့သည်သရုပ်နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် Self-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အပြုအမူ - PU ပတ်သတ်ပြီးအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားလုံးလေ့လာမှုများသိသိသာသာရလဒ်များကိုအစီရင်ခံအတူ 11 လေ့လာမှုများအတွက်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ Doornward အားဖြင့်ကောက်ယူအဆိုပါလေ့လာမှု, et al။ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအပါအဝင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ 'စိတ်ကျရောဂါနှင့်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်၏ Self-လေးစားမှု, မြင့်မားသောအဆင့်နိမ့်အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအခြေအနေ၌အခြားသောလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့် social networking site များကိုပိုမိုသက်တူရွယ်တူခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့နှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုစဉ်းစား သာ. ကွီးမွတျအတှေ့အကွုံညွှန်ပြခဲ့ကြသည်ယောက်ျားလေးများသူပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းများ၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုသရုပ်ပြသူကိုယောက်ျားလေးများတစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ရှိသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တော်မှာ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းစားသုံးမှုနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူ '' ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု: စာပေကနေနောက်ဆုံးပေါ်သက်သေအထောက်အထား (2019) - စိတ္တဇမှ:
တစ်ဦးကစာပေရှာဖွေရေး "(ညစ်ညမ်း OR လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်း) နှင့် (ဆယ်ကျော်သက် OR ကလေးက OR ငယ်ရွယ်) နှင့် (သက်ရောက်မှု OR အပြုအမူ OR ကျန်းမာရေး)" အဆိုပါမေးမြန်းမှုနှင့်အတူမတ်လ 2018 အတွက် PubMed နှင့် ScienceDirect အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ 2013 နှင့် 2018 အကြားထုတ်ဝေရလဒ်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ယခင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။
အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်, ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ကျားမအခန်းကဏ္ဍ assimilating, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအတုခိုးပြီး, မျိုးစုံနှင့် / သို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါမိတ်ဖက်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံ, အလုပ်မဖြစ် - မရွေးလေ့လာမှုများ (ဎ = 19), အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုနှင့်အများအပြား, အမူအကျင့် psychophysical နှင့်လူမှုရေးရလဒ်များအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အဆိုအရ ခန္ဓာကိုယ်အမြင်, မှထုတ်ပြန်သော, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု - အတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။
အရွယ်မရောက်သေးသူ '' ကျန်းမာရေးအပေါ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အဆိုပါကိစ္စမဟုတ်တော့လစျြလြူရှုနိုင်ပါတယ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် multidisciplinary ကြားဝင်ခြင်းဖြင့်ပစ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားပညာပေးအစီအစဉ်များအားဖွငျ့မိဘများ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအားပေးသူတို့အား, ညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲယင်း၏အသုံးပြုမှုလျော့ကျလာခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပိုမိုသင့်လျော်ကြောင်းတစ်ဦးထိခိုက်စေခြင်းနှင့်လိင်ပညာရေးရယူအတွက်အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကိုအထောက်အကူပြုဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
တစ်သားသမီးရဲ့အခွင့်အရေးကိုမှန်ဘီလူး (2019) မှတဆင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း - အနည်းငယ်ကောက်နုတ်ချက်:
ဖော်ပြသောဆိုးကျိုးများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ ; (၂) အချို့သောလူ ဦး ရေအလိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု (YbarraB & Mitchell, 1; Malamuth & Huppin, 2009; Alexy, et al, 2007) ။ (2009) လူမှုရေးချွတ်ယွင်းမှု (Mesch, 2006; Tsitsika, 2); (2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များ (Peter & Valkenburg, 2005a); နှင့် (2009) compulsivity (Delmonico နှင့် Griffin, 3; Lam, Peng, Mai နှင့် Jing, 2009; Rimington and Gast, 2009; van den Eijnden, Spijkerman, Vermulst, van Rooij နှင့် Engels, 4; Mesch, 2008) ။
အပိုဆောင်းသုတေသနများအရအပြာစာပေရုပ်ပုံများသည်ကလေးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန်အသုံးပြုနေသည် (Carr, 2003;“ Online grooming” nd, 2015; ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာရုံး၊ ၂၀၁၅) ။ မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလကပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုခံရသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သောရှေ့တန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အင်တာဗျူးများကပံ့ပိုးပေးသူများသည်ကလေးများအကြားရွယ်တူချင်းလိင်အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ပွားမှုများတိုးပွားလာသည်ကိုမြင်တွေ့နေရပြီး၊ (Binford, Dimitropoulos, Wilson, Zug, Cullen, & Rieff, အတည်မပြုရသေးသော) ။
အထူးသညစ်ညမ်းမှသားသမီးရဲ့ထိတွေ့မှု၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများအပေါ်အလေးပေးသောစာပေအပြင်, ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်အပါအဝင်လူကြီးများအပေါ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားကြောင်းစာပေတစ်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းမရှိ။ ညစ်ညမ်းမှသားသမီးရဲ့ထိတွေ့မှုအပေါ်အလေးပေးသောသုတေသနများကဲ့သို့ပင်ဤလေ့လာမှုများကိုလည်းလူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေ, လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ, စိတ်ကျရောဂါ, သတ်သေ ideation နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဆဲပါ (Tsitsika, 2009 အပါအဝင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်လူမှုရေး maladjustment အကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြု; Bloom et al, 2015 ။ ကမ့်ဘဲလ်, 2018) ။
ကလေးများအဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်မိန်းကလေးများထိတွေ့မှုလေ့လာမှုက ၄ င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းဖော်ပြသည် (Brown & L'Engle, 2009) ။
သားကဲ့သို့ညစ်ညမ်းထိတွေ့နေသောယောက်ျားလေးများအလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသပါ။ သူတို့ကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု (; ဂျုံးစ်, 2016 "ကလေးသူငယ်ဘေးကင်းရေးအွန်လိုင်း," 2018) ဝန်းကျင်စိုးရိမ်စိတ်သိရှိစေရန်။
အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာအယူအဆများအကြားဆက်စပ်မှုရှိပုံရသည် (Hald, Kuyper, Adam, & de Wit, 2013; Hald, Malamuth, & Yuen, 2010) ။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့သောလိင်နှစ်မျိုးလုံး၏ကလေးများသည်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းများကြားတွင်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်အုပ်စုလိုက်လိင်စသည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့သောသူတို့၏လုပ်ရပ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည် (Livingstone & Mason, 2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့သောလိင်နှစ်မျိုးလုံး၏မြီးကောင်ပေါက်များသည်အစောပိုင်းတွင်လိင်မှုကိစ္စပြုရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည် (Brown & L'Engle, 2009; Owens, et al ။ 2012) တွင်မိတ်ဖက်များစွာရှိသည် (Wright & Randall, 2012; Flood, 2009, p ။ 389) နှင့် paid လိင် (Svedin Akerman, & Priebe, 2011; Wright & Randall, 2012) ။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (2019) မှ၎င်း၏ထူးခြားသော sensitivity ကို၏အစိတ်အပိုင်းများ - အနည်းငယ်ကောက်နုတ်ချက်:
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်၏ထူးခြားသောစံနမူနာများတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည်။ , 1; Vigil et al, 2016 ။ ); neuroplasticity များအတွက် 2010) တစ် ဦး ကမြင့်ကာလ (McCormick & Mathews, 2011; Schulz & Sisk, 2010; Sisk & Zehr, 2011; ။ Vigil et al, 2); ၃) အလွန်အကျွံမသုံးခြင်း dopamine system (Andersen, Rutstein, Benzo, Hostetter, & Teicher, 2007; Ernst et al ။ , 2006; Luciana, Wahlstrom, & White, 2005; Somerville & Jones, 2011; Wahlstrom, White, & Luciana, 3) ; ၄) HPA ၀ င်ရိုးသိသာထင်ရှားသောအချက် (Dahl & Gunnar, 1997; McCormick & Mathews, 2005; Romeo, Lee, Chhua, McPherson, & McEwan, 2010; Walker, Sabuwalla, & Huot, 2010); ၅)
testosterone ဟော်မုန်းပမာဏတိုးများ (Dorn et al ။ , 2003; Vogel, 2008; Mayo Clinic / Mayo Medical Laboratories, 2017); နှင့် ၆) မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ပြတင်းပေါက်အတွင်း ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် steroid hormones (cortisol နှင့် testosterone) သည်ထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု (Brown & Spencer, 6; Peper, Hulshoff Pol, Crone, Van Honk, 2013; Sisk & Zehr, 2011; Vigil et al ။ , 2005) ။
Blakemore နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လယ်ကွင်းဦးဆောင်ကြနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကြောင့်အရပ်ဌာန (Blakemore, 2012) ယူပြီးသောအံ့သြဖွယ်ဦးနှောက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်အထိခိုက်မခံကာလထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်း opined သိရသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအများဆုံးပြောင်းလဲမှုကိုခံယူသောဦးနှောက်၏ဒေသများပြည်တွင်းရေးထိန်းချုပ်မှု, Multi-tasking နဲ့စီစဉ် (Blakemore, 2012) တို့ပါဝင်သည်။
Blakemore နှင့် Robbins (2012) အန္တရာယ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏ Hyper-တုံ့ပြန်မှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောဆုလာဘ်စနစ်၏ nonlinear ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်တုန့်ပြန်တားစီး၏အတော်လေးနှေးကွေး, linear ဖွံ့ဖြိုးရေး, အကြား dissociation ဤဝိသေသစွပ်စွဲ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆုလာဘ် .. ...
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဂရိဆယ်ကျော်သက်များအကြားလူမှုရေးမမှန်မကန်ပြုပြင်မှုများနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည် (Tsitsika et al ။ , 2009) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လျှော့စျေးကိုနှောင့်နှေးစေခြင်းသို့မဟုတ်ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေရန်အတွက်နောင်အနာဂတ်ရလဒ်များကိုလျှော့ချရန်လူတစ် ဦး ၏စိတ်သဘောထား (Negash, Sheppard, Lambert, & Fincham, 2016) မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ Negash နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ပျမ်းမျှအသက် ၁၉ နှစ်နှင့် ၂၀ ကြားရှိသောနမူနာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စာရေးသူကဇီဝဗေဒအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဟုသတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်သည်ဟုစာရေးသူဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်၏ထူးခြားသော Paradigm နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများစဉ်းစားတစ်ဦးအလုပ်လုပ်မော်ဒယ်အကျဉ်းချုပ်တင်ပြသည်။ ထူးခြားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ်သော့ချက်ဒေသများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ထပ်တူမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ပါကအရွယ်ရောက်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် amygdala နှင့် HPA ဝင်ရိုးကိုနှိုးဆွသောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်တိုးတက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် prefrontal cortex ကိုပိုမိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေပြီးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရှိ Basal ganglia ကိုပိုမိုတက်ကြွစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအခြေအနေသည်တားဆီးနှိမ်နှင်းခြင်းနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းတို့ပါဝင်သောအလုပ်အမှုဆောင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်လို့ neuroplasticity ကိုပိုအထောက်အကူပြုတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ off-line” ဟုခေါ်သော prefrontal cortex သည် subcortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောသိမ်မွေ့သောပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်။
neuroplasticity မညီမျှမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်အားမိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းနှင့် impulsivity ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ပိုမိုကြီးထွားသော subcortical circuit တစ်ခု၏အားနည်းသော cortical circuit ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ရဲ့နျူကလိယ accumbens, ဒါမှမဟုတ် ဦး နှောက်၏အပျြောအပါးစင်တာ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ချဲ့ကားလှုံ့ဆော်မှုရှိလိမ့်မယ်။ dopamine ပမာဏတိုးများလာခြင်းက dopamine နှင့်အတူပျော်ရွှင်မှုနှင့်တဏှာကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှုများသို့ပြောင်းလဲသွားသည် (Berridge, 2006; Volkow, 2006) ။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်ကြောင့် cortisol နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတို့သည် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုး၏မွေးရာပါရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုထူးခြားစွာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ဤသက်ရောက်မှုကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ရှာ။ မရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအဖွဲ့အစည်း၏သီးခြားပြတင်းပေါက်ပိတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ cortisol နှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကာလအတွင်း neuroplasticity ကိုမောင်းနှင်ရန်အလားအလာရှိပြီးလူကြီးဘဝမှပင်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည် (McEwen, 2004; Tsoory & Richter-Levin, 2006; Tsoory, 2008; McCormick & Mathews, 2007; 2010) ။
အဆိုပါ amygdala post အပျိုဖော်ဝင်၏ကြံ့ခိုင်မှု, အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အရေးပါဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်း testosterone ဟော်မုန်းထိတွေ့၏ပြင်းအားပေါ်တွင်မူတည်သည် (De Lorme, Schulz, Salas-Ramirez, & Sisk, 2012; De Lorme & Sisk, 2013; Neufang et al, 2009; ။ Sarkey, Azcoitia, Garcia- Segura, Garcia-Ovejero, & DonCarlos, 2008) ။ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသော amygdala သည်မြင့်မားသောစိတ်ခံစားမှုအဆင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးမိမိကိုယ်ကိုစည်းမျဉ်းများလျော့နည်းစေသည်။ (Amaral, 2003; Lorberbaum et al, 2004; De Lorme & Sisk, 2013)
တစ်ဦးက Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း: လိင်သဘောထားခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖို့အဓိကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ Exposure ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ (2019) - ကောက်နှုတ်ချက်:
သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ nonexplicit ပုံဖော်ခြင်းမှထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ "sexy မီဒီယာ" ကိုထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရန်အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းအကြံပြုသောဤခေါင်းစဉ်အပေါ်တစ်ဦးတည်းသာ Meta-analysis သည်ရှိ၏။ အဲဒီမှာန့်အသတ်များစွာတည်ဆဲ Meta-analysis သည်ဖြစ်ကြောင်း, ဤ updated Meta-analysis သည်၏ရည်ရွယ်ချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်သုံးစွဲသူများက '' သဘောထားတွေမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များဆနျးစစျဖို့ပဲ။
တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်စာပေရှာဖွေရေးသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေကောက်ယူခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ (အလိုလိုသဘောထားတွေ, သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (ယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏အသက်အရွယ်နှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ) အပါအဝင်ခြောက်ဦးရလဒ်များတဦးအကြားအသင်းအဖွဲ့များအဘို့အ coded ခဲ့သည်။
ယေဘုယျအား, ဒီ Meta-analysis သည်မျိုးစုံရလဒ်ကိုအစီအမံများနှင့်အများအပြားမီဒီယာ spanning မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအကြားတသမတ်တည်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ဆက်ဆံရေးပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ မီဒီယာမြင့်မား, ပျံ့နှံ့နေတဲ့အပန်းဖြေနှင့်အတော်လေးအန္တရာယ်-အခမဲ့  အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖော်ကျူး, ငါတို့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ် viewer ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချပုံဖော်ခြင်းဤအမျိုးအစားများကိုကြည့်ရှုအသုံးပြုပုံတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် shaped စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မီဒီယာရဲ့သက်ရောက်မှု  အသေးအဖွဲသို့မဟုတ်လည်းမရှိခဲ့ချေခဲ့ကြောင်းအကြံပြုသောယခင် Meta-analysis သည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိ metaanalysis ထက်ပို 38 ကြိမ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (ဎ = 08) ၏ပမာဏကိုအသုံးပြုခဲ့သော်လည်း, 10 အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကိုအသုံးပြုပြီး "sexy" မီဒီယာကိုအားနည်းစွာနှင့်အသေးအဖွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (r = .394) နဲ့ related ခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ယခင် metaanalysis ကာအကျိုးသက်ရောက်မှုနီးပါးနှစ်ဆအရွယ်အစား (r = .14) တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးစွာကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်ဆယ်ကျော်သက် 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'အလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်၎င်းတို့၏ရွယ်တူ' 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံသဘောထားအမြင်မှထိတွေ့မှုများအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်, ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, နှင့်အန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အသက်အရွယ်အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်မျိုးစုံနည်းစနစ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုံနှင့်မီဒီယာငယ်ရွယ်ကြည့်ရှု၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများမှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းအခိုင်အမာထောက်ခံသည်။
အဆိုပါ Meta-analysis သည်အကျိုးစီးပွားအားလုံး variable တွေကိုဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်းသိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများသရုပ်ပြပေမယ့်အဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများအနည်းငယ် variable တွေကိုအားဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ အများစုကအထူးသအပေါင်းတို့, အသက်အရွယ်အဘို့အသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုသရုပ်ကြ၏ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကောင်းအဟောင်းတွေသင်တန်းသားများကိုဖွယ်ရှိငယ်ရွယ်သောသင်တန်းသားများကို [36, 37] ထက်အပေါ်ကိုဆွဲဖို့ပိုနှိုင်းယှဉ်, အစစ်အမှန်ကမ္ဘာအတွေ့အကြုံရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုထင်ဟပ်, ထွန်းသစ်စလူကြီးများအတွက်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်အကြီးစားထက်ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်  ယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုကိုက်ညီခြင်းနှင့်အထီးဇာတ်ကောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်  ကိုလျော့နည်းမကြာခဏအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ထက်အပြစ်ပေးကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသောကွောငျ့, အမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအထီးအဘို့အအားကောင်းခဲ့သည်။
ဤတွေ့ရှိချက်များသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ မြင့်မားသောရွယ်တူချင်းလိင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်အရခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွင်းဖိအားကိုပိုမိုခံစားစေနိုင်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်လိင်မီဒီယာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် ၉၁၇ လမှလိင်မှုပြုခြင်းကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အစောပိုင်းစမ်းသပ်ချက်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်တွေ့ရှိခဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်မှုများ  prosocial အပြုအမူ  နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို  မီဒီယာရဲ့သက်ရောက်မှုအဖြစ်မီဒီယာစိတ်ပညာ၏အခြားလေ့လာခဲ့ဒေသများ၏သူတို့အားဆင်တူသည်။ မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုစိတ်ဝင်စားမှုများ၏ရလဒ်များအတွက်စုစုပေါင်းကှဲလှဲသာဘို့အကောင့်ပေမယ့်ထိုအမှုကိစ္စ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်,, မီဒီယာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှလုပ်ပါ။ ဤရွေ့ကားနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက်နှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သေးငယ်တဲ့, ဒါပေမယ့်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖော်ပြချက် (2020) - ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအနှစ်ချုပ်ထားသောအဓိကဇယားနှစ်ခု
လူငယ်များ၊ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောခေတ် (၂၀၂၀) - ကောက်နှုတ်ချက်:
မကြာသေးမီကကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များ၏လိင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုများတိုးပွားလာပြီးဒေသတွင်းလေ့လာမှုများပိုမိုများပြားလာသည်။ ဤစာတမ်းသည်ယူကေတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုများအပါအဝင်ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်စုစည်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ စာပေသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်လူငယ်များ၏သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသသည်။ ဤအချက်ကလူငယ်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏လိင်စိတ်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သက်ရောက်မှုသည်လူငယ်များ၏ပံ့ပိုးမှုကွန်ယက်၊ လူမှုရေးသင်ယူမှုနှင့်အခြားလူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အနည်းဆုံးကျား၊ မမထင်ရှားသောထင်ရှားမှုရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများကလူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များပြောင်းလဲခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းအားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စအိုမှလိင်ဆက်ဆံမှုတိုးလာခြင်းနှင့်သဘောတူခွင့်ပြုသည့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသဘောထားများဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုများကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤပုံရိပ်ကြောင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များသည်မည်သို့နှင့်မည်သည့်နည်းများဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်များကိုသက်ရောက်နိုင်သနည်း၊ လူငယ်များအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုစာပေနှင့်ကွာဟချက်များနှင့်လက်ရှိစာပေများနှင့်ပတ်သက်သောပြtheနာများအရဆွေးနွေးငြင်းခုံထားသည်။ ထပ်မံလေ့လာရန်လိုအပ်ကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏လူငယ်စားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ - ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၂၁) - Abstract:
ဆယ်ကျော်သက်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဤအွန်လိုင်းကမ္ဘာသစ်မှရရှိသောစိုးရိမ်စရာအကောင်းဆုံးပြtheနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးဆက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်များကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့် paraphilias၊ ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုကျူးလွန်ခြင်းစသည့်ဤဖြစ်စဉ်၏မှုခင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်များ၏ပုံစံအသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ အဓိကတွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်သည်အသက် ၈ နှစ်အရွယ်တွင်စတင်သည်၊ အရေးကြီးသောအမူအကျင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များဖြစ်သည့် hypersexualization၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်ကျား၊ ထို့အပြင်လူငယ်များမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း paraphilias ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများနှင့်သားကောင်နှိပ်စက်ခံရမှုများတိုးများလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
တစ်ဦး (L) ကိုအောက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးလေ့လာမှုအကြောင်း Lay ဆောင်းပါးဖော်ပြသည်။
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2012)
လိင်စွဲလမ်း (2013) ၏တစ်ဦးက New Generation အဖွဲ့
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းနှင့်အရွယ်မရောက်သေးသူ '' ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများစားသုံးမှု: စာပေ (2019) မှနောက်ဆုံးပေါ်သက်သေအထောက်အထား
လူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မီဒီယာအသစ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှိပါသလား? တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2016)
ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: သုတေသန Trends 2000-2017 ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျစာပေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ (2018)
'ငါနေရာတိုင်းမြင်ရ': ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအွန်လိုင်း (2018) မှထိတွေ့မှု unintended
"ငါသည်အဘယ်သို့ပြုပါသငျ့သလော": ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများ (2017) နဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးများ၏အစီရင်ခံစာအကြပ်အတည်း
"Porn မရှိရင် ... ငါအခုတော့သိပါထက်ဝက်ခန့်အရာကိုသိမပေးမလား": မြို့ပြ, အနိမျ့-ဝင်ငွေခွန်, Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်လူငယ် (2015) ၏နမူနာများအနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများ၏အရည်အသွေးလေ့လာ
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိတွေ့ရာမှ Protected ခံရဖို့ကလေးတစ်ဦး၏ညာဘက်: ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအားဖြင့်ပျက်စီးစေသောအရာကိုအကဲဖြတ်နှင့်ကလေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအှနျလိုငျး (2019) မှာရည်ရွယ်လက်ရှိစည်းမျဉ်းနှင့်ဥပဒေမူဘောင်သုံးသပ်စိစစ်
ညစ်ညမ်းမှာတစ်ပုလ်ကြည့် - စိတ်ကူးယဉ် မှစ. လက်တွေ့ဘဝမှ (ကိုရှိမုနျ Lajeunesse)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှု၏တစ်ဦးကဒီကိစ္စကို: Addis Ababa, အီသီယိုးပီး (2016) တွင် Viagra ၏လူပျိုတို့ရဲ့ Non-ဆေးညွှန်းကိုအသုံးပြုခြင်း
သူတို့ရဲ့မီဒီယာရွေးချယ်မှု (2011) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ရှာ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်
ကာလကတ္တား, အိန္ဒိယ (2014) တွင်ဆယ်ကျော်သက်ကျောင်းသားများအကြားဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးကလေ့လာမှု
အီသီယိုးပီးခုနှစ်တွင်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့်ကူးစက်ရောဂါများ၏ Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း, 2018 (2019)
Preexisting ယုံကြည်ချက်, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ Exposure နှင့်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်း (2013) ၏တစ်ဦးကသုံး-Wave ကို longitudinal အားသုံးသပ်ခြင်း
ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူလူငယ်များနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာ symptomology (2018) ၏အလွဲသုံးစားမှုထုတ်ဖော်
ဆယ်ကျော်သက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ကထူးခြားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်ဆန်းလား? (2018)
ဆယ်ကျော်သက်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း, မိဘ-ဆယ်ကျော်သက်လိင်ကျန်းမာရေးဆက်သွယ်ရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အမေရိကန်ဖြစ်တန်ရာကိန်းနမူနာကနေတွေ့ရှိချက် (2019)
ဆယ်ကျော်သက် hypersexuality: ကတစ်ဦးကွဲပြားရောဂါလား? (2016)
ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုခြင်း: ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2009) ၏ multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အဓိကအား Black နဲ့ဟစ်စပန်းနစ်တစ်နမူနာအကြားဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှု, မြို့ပြ-Resident, အသက်မပြည့်သေးလူငယ် (2015)
ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရိပ်မိညစ်ညမ်းသရုပ်မှန်၏ဒိုင်းနမစ်: ပိုပြီးပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျလုပ်မြင်နေပါသလား? (2019)
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, Impulse နှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေ (2010)
မြီးကောင်ပေါက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: သုတေသန 20 နှစ်များတစ်သုံးသပ်ချက် (2016)
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်္တုအဖြစ်အမျိုးသမီးအပ်ချုပ်: အကဲဖြတ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နှင့် underlying လုပ်ငန်းစဉ် (2009)
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်သက်မှုကြောင့်နှင့် Uncommitted လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှာဖွေရေးခါနီးသဘောထားများကို: တစ် Link ကိုရှိပါသလော (2008)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကို (2011) နဲ့မြီးကောင်ပေါက် '' ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေနှင့်၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့များ - 47th-7th တန်းကျောင်းသူလေး၏ 9% porn ကိုအသုံးပြုပါ။
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်အတွက်ဆွဲဆောင်ဖို့စိတ်: Differential ဆက်ဆံရေးနှင့် underlying လုပ်ငန်းစဉ် (2016)
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမငြိမ်သက်မှုကြောင့်: ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ကျား၏အခန်းက္ပ (2010)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းမြီးကောင်ပေါက် '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းသဘောထားများနှင့်အပြုအမူ: စင်ပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် directional သက်ရောက်မှု (2015)
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2009)
အင်တာနက်ကို (2006) အပေါ်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းမှဆယ်ကျော်သက် '' Exposure
မြီးကောင်ပေါက် '' အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ: အဆိုပါကျားမများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဘာသာရေး, နှင့်မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင် (2013)
မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ပေါ့ပေါ့လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်အားထက်သန်: Differential ဆက်ဆံရေးနှင့်နောက်ခံဖြစ်စဉ်များ (2017)
ညစ်ညမ်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်အမြိုးသမီးမြားအပျေါအ (2017) ယောက်ျားရဲ့သဘောထားတွေပုံစံသွင်းသွင်း
ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးတို့အတွက်လူငယ်များနှင့်သက်ရောက်မှုတွေအကြားစအို heterosex: ဗြိတိန်အတွက်အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2014)
နှစ်စဉ်သုတေသနသုံးသပ်ချက်ကို: အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းနည်းပညာကလေးကအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကြုံတွေ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်: ဒီဂျစ်တယ်ခေတ် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရန်လိုအန္တရာယ်များ၏သဘောသဘာဝ, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု၏ Antecedents: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2015)
Hawassa စီးတီး, တောင်ပိုင်းအီသီယိုးပီးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းကလူငယ်အချို့အကြားထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်အချက်တွေထိတွေ့အကဲဖြတ်: cross-section အဖွဲ့အစည်းအခြေစိုက်စစ်တမ်း (2015)
ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု pubertal အချိန်ကိုက်နှင့်ဒုံးကျည်သွားလမ်းအကြားရှိအသင်း (2015)
ဆယ်ကျော်သက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအရှက်ကွဲခြင်းတို့အကြားဆက်နွယ်မှု (၂၀၂၁)
မြီးကောင်ပေါက်အကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ: ဒဏ္ဍာရီသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်? (2011)
ဆွီဒင် (2005) တွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အကြားအသင်းအဖွဲ့များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဦးစားပေး, အပြုအမူနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု (2011) အကြားအသင်းအဖွဲ့များ
ပိုလနျအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေ: အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်အတူလင့်များ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ယာနျဘာသာတရားကို (2016)
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိဖြစ်လာခြင်း: ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ '' အခန်းထဲမှာဆင် '(2017)
Burnet Institute မှလေ့လာမှုများသြစတြေးလျဆယ်ကျော်သက် (2014) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အလင်းကိုသွန်း
ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းသည်ကင်ဆာရောဂါ - ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သောအစီအစဉ်များကိုလူငယ်များထောက်ခံမှု (၂၀၂၀)
အွန်လိုင်းဂိမ်း, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း, သောက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2015) များထဲတွင်အဆိုပါ Links များအားရှင်းလင်းထားသည့်
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများထဲတွင် compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း: Bidirectional မိဘ-ကလေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2010)
ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2013) တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
ဟောင်ကောင်ရှိအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု: profile များကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (2012)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စားသုံးမှု, ခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့် Condomless လိင် (2016)
လူငယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေနဲ့ဆက်စပ် Criminogenic အချက်များ - တစ်ဦးအရည်အသွေး interdisciplinary ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုအကဲဖြတ် (2018)
အကြီးတန်းကောလိပ်အထီးကျောင်းသားများနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ကျရောဂါ-စိုးရိမ်စိတ်-ဖိအား (2017) နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်စပ်မှုအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလက်ရှိအခြေအနေ
ကျဘာနှင့် E-ဆယ်ကျော်သက်: အဘယ်အရာကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုသကိုသိသင့်ပါတယ်။ (2008)
စပိန်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (2016): မှာ "Net ကမျိုးဆက်" ၌ကျဘာ
ဘာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: ကနျြးမာရေးပညာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု (2007)
, လက်တွေ့ psychopathological, လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့် (2018): လူငယ်များအကြားတွင်ဘာ-စွဲ
စင်္ကာပူမှာအမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများ (2016) နဲ့လိင်ထားရှိခြင်းသည်လိင်ကွဲပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်
အငယ်တန်းနှင့်အ Sanggau ခရိုင်အကြီးတန်း High School တွင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အနောက် Kalimantan (2019) ရက်တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure သက်ရောက်မှု၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူမှုသို့ Pathways နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Deviance (2010)
လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ differential Developmental Profiles (2014)
အွန်လိုင်းအာရပ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မိဘများအကြားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအကြောင်းအရာထိတွေ့အပေါ်ဟောပြောချက်: အရည်အသွေးလိင်ပညာပေးအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်လေ့လာမှုနှင့်အပြုအမူ (2018)
သင့်ရဲ့မိခင်ကိုသင်တကယ်လုပ်ပါဘယ်အရာကိုသိပါသလား Computer ကို-အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2006) ၏ပြောင်းခြင်းသဘာဝတရားနှင့်ပုံရိပ်
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစောစောဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများ '' ထိတွေ့: pubertal အချိန်ကိုက်အာရုံရှာနှင့်ပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2014)
တီဂေးအလယ်ပိုင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသားများအကြားအစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ၊ အီသီယိုးပီးယားမြောက်ပိုင်း၊ ၂၀၁၈ (၂၀၁၁)
အီသီယိုးပီးယားရှိကျောင်းသားများအကြားအစောပိုင်းလိင်ဆိုင်ရာပွဲ ဦး ထွက်နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် meta-analysis (၂၀၂၀)
အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ: အင်တာနက်ကိုလက်လှမ်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (2008)
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2017) - Rourkela အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကျောင်းကသားသမီးများ၏ psychosomatic ကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်အကျိုးသက်ရောက်မှု
Osogbo မြို့တော်အတွက်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာနှင့်အင်တာနက် effect, အနောက်တောင်ပိုင်းနိုင်ဂျီးရီးယား (2014)
2008 အတွက် Pontianak ၏အငယ်တန်း High School တွင်ဆယ်ကျော်သက် (2010) ရက်နေ့တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အကြီးတန်း High School တွင်ကျောင်းသားများ, ဂါနာတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ဆိုးကျိုးများ။ (2016)
အရွယ်ရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူထွန်းသစ်စ: ရှက်ကြောက်စိတ်အရေးပါပါသလား (2013)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏ Active ကိုအာမခံထွန်းသစ်စလူကြီးများတုံ့ပြန်ချက် (2015)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာ (2009) မှဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့ကိုခနျ့မှနျး
ညစ်ညမ်း၏ကန့်သတ်ဘို့သက်ရောက်မှု (2008): ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ပထမ, ဒုတိယနှင့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ပါ
၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားအုပ်စုတစု (2009) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းဆီသို့ဦးတည်သဘောထားများ
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိတွေ့၏စမ်းသပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပုဂ္ဂိုလ်ရေး၏စီမံခန့်ခွဲမှု Effect နဲ့လိင်စိတ်နိုးထ၏ဖျန်ဖြေ Effect (2014)
တစ်ဦးက Two-အဆင့်ဖြန်ဖြေမော်ဒယ် (2018): လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်အကြားဆက်ဆံရေးကိုရှင်းပြ
တစ်ဦးအရည်အသွေးစစ်တမ်း (2016): လူပျိုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှု Exploring
ညစ်ညမ်းမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု (1999) အားထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ထိတွေ့မှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (2018) ကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့် desensitization တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှ exposure
လူငယ်များအကြားတွင်အပြာစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - လေ့လာမှုလေ့လာခြင်း (၂၀၂၁)
လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမှ exposure ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် (2012) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူခန့်မှန်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှ exposure (2009)
X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်, Movies များနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်နှင့် contraceptives-Related သဘောထားနှင့်အပြုအမူ (2001) မှ exposure
တောင်ကိုရီးယား High School တွင်ကျောင်းသားများ (2015) တွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပိုးမကူးစက်ထိခိုက်အချက်များ
High School တွင်ကျောင်းသားများ (2015) များထဲတွင်အကြမ်းဖက်သို့မဟုတ် degradation ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ Exposure နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အချက်များ
ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီကောင်တီရှိရွေးချယ်သောအလယ်တန်းကျောင်းများမှကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (2019)
ထူးအိမ်သင်သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား? ငါးဆယ် Shades ကျန်းမာရေးနှင့်အတူ Associated ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များနှင့်လူငယ်လူကြီးမိန်းမတွေကအတွက်အန္တရာယ်များ (2014) ဖြစ်ပါသည်
အတင်းအဓမ္မလိင်, မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်: တောင်ပိုင်းကီဗူအတွက်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားသဘောထားများနှင့်အတွေ့အကြုံများ, ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (2014)
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency သွယ်ဝိုက်တရုတ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (2011) ကြားတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမှတဆင့်နိမ့်တဲ့ဆကျဆံရေးယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက် (2010) ၏တစ်ဦးကလူဦးရေကိုအခြေခံပြီး epidemiological လေ့လာမှု
လူငယ်များ၏အင်တာနက်စွဲမှုစမ်းသပ်ခြင်း (IAT) ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအတွက်နောက်ထပ်အထောက်အထား - အစ္စရေး - အာရပ်အမျိုးသားဆယ်ကျော်သက်များ၏နမူနာကိုလေ့လာခြင်း (2019)
ကျားခြားနားချက်, လူတန်းစားအဆင့်နှင့်အလယ်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အပေါ်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အထီးကျန်၏အခန်းကဏ္ဍကို (2017)
ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများ (2006) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှု
မျိုးဆက် M2: 8 နှစ်အရွယ် (18-2008) မှ 09- ၏ဘဝအသက်အတွက်မီဒီယာ
မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကို XXX: လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (2008) များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်အသုံးပြုမှု
ဆီယာရာလီယွန် (2014) တွင်ငယ်ရွယ်သောလူမျိုး '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်ညစ်ညမ်း၏တည်ရှိမှု, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ကို 'ဘလူး' 'ရယူခြင်း
လူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပိုမိုထိတွေ့အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်ရိုက်ယူခြင်းတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ် (2015) ခန့်မှန်း
အများပြည်သူကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်ညစ်ညမ်းဆင်အတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေး၏အခန်းကဏ္ဍ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (2008) နဲ့ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးမဟာဗျူဟာများ
အိုယိုပြည်နယ်၏ Ogbomoso မြောက်အမေရိကဒေသခံအစိုးရဧရိယာ (2016) တွင် In-School တွင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏ကနျြးမာရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု
အမြင့်စာရိုက်နှုန်းအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားတစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှု (2015) တွင်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံကိုဖျန်ဖြေ
တီဟီရန်မှာရှိတဲ့အထီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြား HIV / ကာလသားအန္တရာယ်-ယူပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အန္တရာယ်အမြင်: လူငယ်များအကြား HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေ (2017)
ကလေးများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးက 10-တစ်နှစ်တာသုံးသပ်ချက် (2001)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-စွဲ Juvenile ဘာသာရပ်များ (2019) တွင်ချို့ယွင်းမကြာမီကနှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်
ဟောင်ကောင် (2016) တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်ရည်ရွယ်တဲ့စားသုံးမှုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုအကာအကွယ်အချက်များ
သန့်ရှင်းသောဘုရားခရိုင်၏လိင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းရန် Partner မီဒီယာအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပြီးတော့သူငယ်ချင်းများ၏ Exposure ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2018)
အနောက်တောင်နိုင်ဂျီးရီးယား (2016) ၏တစ်ဦးမြို့ပြခရိုင်အတွင်းရှိငယ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
လိင်ဆီသို့မြီးကောင်ပေါက် 'နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်' 'သဘောထားအပေါ် erotica ဖို့ထိန်းအကွပ်မရှိသော access ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2000)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲ - ဆေးကုသမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (၂၀၂၀)
တစ်ဦးဒတျချြနမူနာ (2016) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်
စာသင်ခန်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များ၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ (2018): ဆယ်ကျော်သက်အင်တာနက်စွဲများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့် preference ကို
နိဒါန်း - ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်း - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေ၏အန္တရာယ်များနှင့်အန္တရာယ်များ (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု hookups စဉ်အတွင်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်မူးယစ်နှင့်ဆက်နွယ်သလဲ? (2015)
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance နှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ erotica လား? (1991)
ဒါဟာနေရာတိုင်းပဲ! ညစ်ညမ်း (2006) အကြောင်းကိုငယ်ရွယ်ဆွီဒင်လူရဲ့အတှေးအများနှင့်ထင်ဟပ်
လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ, အမြိုးသမီးမြား၏သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာနှင့်လိင်ခွင့်ပြုချက်သဘောထားများကို (2011) မှဂျပန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ '' မီဒီယာ Exposure
Juvenile လိင်ကျူးလွန်သူများ (2016)
မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်ရေးမှပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' Access ကိုများအတွက်ပံ့ပိုးဖို့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုချိတ်ဆက်: အကွိမျမြားစှာကို Cross-Section နှင့် longitudinal အမျိုးသားစစ်တမ်းများ (2018) မှတိုးပွားလာသောရလဒ်များ
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' သဘောထားနှင့်အပြုအမူအကြား longitudinal အသင်းအဖွဲ့များ: လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (2017)
အနိမ့်စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံလိင်စိတ်ဝင်စားမှုဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Boys တွေထဲမှာလိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း (2015) ၏ compulsive အသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုခန့်မှန်း
အထီးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ခေတ်ပြိုင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအတိုင်ပင်ခံများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2014)
ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် (2011) အတွက်အရေးဆိုမှုအကဲဖြတ်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအကျိုးသက်ရောက်မှု
metoo အများကြီး? ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုဒဏ္acceptanceာရီများလက်ခံခြင်းကိုခုခံတွန်းလှန်ရာတွင်အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၁၉)
ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးမြို့ပြကျန်းမာရေးဆေးခန်းလူနာ (2012) ၏နမူနာအကြား multi-လူတစ်လိင်
အဘယ်သူမျှမဆင်ခြေ: ရုပ်မြင်သံကြားကနေညစ်ညမ်းပျက်ဆီးကလေးများ (1999)
လိင်ကွဲကျောင်းသားများအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွေ့အကြုံကို: ကျားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (2011)
မိဘများ၊ ရွယ်တူချင်းများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်နှင့်မိဘကြားဝင်စေ့စပ်မှု၏လွှမ်းမိုးမှု
ရွယ်တူချင်းကို attachment, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြား sexting အပြုအမူတွေ၏ခန့်မှန်းအဖြစ်အန္တရာယ်များအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေ (2014)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2017) အကြားအသင်းမှတစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ကိုရိပ်မိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်း
ရိပ်မိသရုပ်မှန်အလယ်အလတ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာစားသုံးမှုနှင့်ဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ (2015) အကြား ဆက်စပ်.
Jos တက္ကသိုလ်, နိုင်ဂျီးရီးယား (2019) တွင်လူမှုလေ့လာရေး '' ကျောင်းသားများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုများ၏အမြင်
porn, ရွယ်တူများနှင့်ပါးစပ်လိင်ဖျော်ဖြေ: ပါးစပ်လိင် (2018) နှင့် ပတ်သက်. ညစ်ညမ်းရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သက်တူရွယ်တူစံချိန်စံညွှန်းများဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ
Pornification: မြစ်ချောင်းများပြည်နယ်ထဲမှာလူငယ်လူပုဂ္ဂိုလ်များများထဲမှလိင်ပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဆိုပါပြောင်းခြင်းယဉ်ကျေးမှု (2018)
ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာနှင့်ရီးရဲလ်-ဘဝကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ: ဂျာမန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတစ်ဦးစစ်တမ်း မှစ. တွေ့ရှိချက် (2018)
တုပနှင့် cathartic သက်ရောက်မှု (2011): ဘဝသင်တန်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ Correlate နှင့်ဂို့ပြည်နယ်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်များအတွက်ကျောင်းသားများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာညှိယူ (2012) အဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲ
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: မုဒိမ်းမှုနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု proclivity နှင့်အတူအကြမ်းဖက်များနှင့်အကြမ်းမဖက်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏အသင်း (1994)
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် Abidjan (2015) ၏ Cocody ခရိုင်အတွင်းရှိကျောင်းသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်: တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု (2005) ၏အရေးပါမှု
ညစ်ညမ်းနှင့်ကလေးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး: လက်ရှိအသိပညာနှင့်သီအိုရီအနာဂတ် (2014)
ငယ်ရွယ်အင်ဒိုနီးရှားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် Non-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2013)
ဆွီဒင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် psychosomatic နှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ: တစ် longitudinal လေ့လာမှု (2018)
ဆွီဒင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, psychosomatic ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ (2014)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအကြား sexting: ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏စနစ်တကျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ပိုလန်နှင့်ဂျာမန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ (2015) တွေထဲမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
လိင်ကတုံ့ပြန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအပြုအမူတစ်ခုရန်လိုပုံစံ (2009) များအတွက်အန္တရာယ်အမှတ်အသားအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု
အဖွဲ့များကြားတွင်အမျိုးသားများအကြားကိုကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်း: ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအပေါ်သက်ရောက်မှု, မုဒိမ်း Myth ဟာလက်ခံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault (2011) အပ်ရန်အပြုအမူရည်ရွယ်ချက်
ပညာရှင်များအတွက်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်စွန့်စားမှုအမူအကျင့် (2015)
တစ်ဦးကဥရောပလေ့လာမှု (2016): လူငယျမြားရဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးမှုနှင့် sexting
ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး, လုလင်တို့သည်လည်း (2008) အကြားစိတ်ကျေနပ်မှု
ဆယ်ကျော်သက် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၏ပေါ်ထွန်းရေးခန့်မှန်း
Pokhara Sub-တဲ့ Metropolitan City, နီပေါ (2018) တွင်ပိုမိုမြင့်မားအလယ်တန်းကျောင်းသားများအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
Debretabor မြို့မှာအထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ, တောင် Gondar ဇုန်, မြောက်အနောက်အီသီယိုးပီး, 2017 (2019)
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်၎င်း၏ခန့်မှန်း: အဖွဲ့အစည်းအခြေစိုက်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု (2017)
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဆက်စပ်မှု: Hefei, တရုတ် (2012) တွင်တစ်ဦးလေ့လာမှု: ယောက်ျား၏ 86% porn ကိုသုံးပါ
မလေးရှားမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့တက္ကသိုလ် (2019) တွင်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအကြားပျံ့နှံ့မှုနှင့်ရောဂါဗေဒကအင်တာနက်သုံးစွဲမှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် Kendall ရင်ခွင်ပိုက်, အင်ဒိုနီးရှား (2018) တွင် High School တွင်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Activite နှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့အချက်များ
လိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရင်းခံကျတာကတော့လုပ်ငန်းစဉ်များ: ခံစား realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်း (2010) ၏အခန်းက္ပ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏လူငယ်စားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မှုခင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ - ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၂၁)
Dodoma – Tanzania ရှိဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသိသာထင်ရှားသည့်ပစ္စည်းများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအခက်အခဲများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း (၂၀၂၀)
Pubertal Timing, မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလမ်းကြောင်း: အာမခံအဖြစ်ရွယ်တူချင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2019)
ဂို့ပြည်နယ် (2019) တွင်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအိမ်မထောင်မီလိင်မှရွယ်တူချင်းဖိအား, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်သဘောထားကိုကြားက relationship
Cybersex အပြုအမူဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းသည်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အကြံပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၂၀)
sidoarjo (2018) မှာဆယ်ကျော်သက်များ၏အန္တရာယ်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏သဘောထားအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
ဘာစွဲ, ကျား, မသာတူညီမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစရိတ် (2007) အကြားဆက်ဆံရေး
တစ်သုံး-Wave ကို longitudinal လေ့လာမှု (2018): အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံနှင့်ဟောင်ကောင်တရုတ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မှ Exposure အကြားဆက်ဆံရေး
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည် UK မှဆယ်ကျော်သက်များ ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အထိ (၂၀၂၀) ကိုလေ့လာခြင်း
စွန့်စားမှုသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိ ?: Porn အသုံးပြုမှုလမ်းကြောင်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါင်းအဖေါ်များ၏စုဆောင်းခြင်း (2018)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်း Young ကအမေရိကန်တွေရဲ့ဘာသာရေးဘဝပုံစံ (2017) ပုံစံသွင်းသွင်းဘယ်လို: ကိုမြင်လျှင်ယုံကြည် (မ) ဖြစ်ပါသည်
အင်တာနက်ပေါ်ရှိခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာသုံးပြီးလူငယ်များ (2018) ၏ self-အကဲဖြတ်
လိင်-related အွန်လိုင်းအပြုအမူတွေနှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-သဘောထားအမြင် (2014)
လိင်-Related အွန်လိုင်းအပြုအမူ, ခံစားရွယ်တူချင်းစံနှုန်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' အတွေ့အကြုံ: တစ်ခု Integrated မော်ဒယ် (2015) စမ်းသပ်စဉ်
လိင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, sexting နှင့် SexEd: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မီဒီယာ (2009)
Sexting အပြုအမူတွေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစွဲ: အရက်သောက်၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ဍ (2017)
ဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံရေးအတွက် script များကို Sexting: စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာ sexting ပါသလား (2018)
ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2007)
တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019): Nekemte မြို့အရှေ့ Wollega, Oromia, အီသီယိုးပီးများတွင်လူငယ်အချို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်အချက်များ
Ibadan တက္ကသိုလ် (2015) တွင်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများအကြားတွင်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အသုံးပြုခြင်း
အိုက်စလန်အတွက်က Secondary School တွင်ကျောင်းသားများ (2017) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု
Bahir Dar တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်အချက်များ: တစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းလေ့လာမှု (2014)
လိင်ကအကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်မငြိမ်သက်မှုကြောင့်: သဘောထား-အကြောင်းအရာ Congruency (2015) ၏အခန်းက္ပ
လိင်ကအကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' လိင်စွမ်းဆောင်ရည်အရှေ့တိုင်းဆန်: ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ခံစား Utility ကို (2018) ၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍ
အမေရိကန် (14) တွင် 17-2019-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအထီးတွေထဲမှာလိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာအသုံးပြုမှု
အဲဒိုပြည်နယ်, နိုင်ဂျီးရီးယား (2019) ခုနှစ်တွင်ကျောင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခုနှစ်တွင်များထဲတွင်ကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်းအနက်ခန့်မှန်းထားသကဲ့သို့လူမှုရေးအချက်များ
Zaria, နိုင်ဂျီးရီးယား (2017) ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဖို့အတွက်ဆယ်ကျော်သက် '' Exposure
အဆိုပါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှ Exposure နှင့် Medan အတွက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအစည်းအရုံး, မြောက်အမေရိက Sumatera (2018)
အဆင့် 10 High School တွင်ကျောင်းသားများ (2019) တွင်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ချိန်းတွေ့အကြမ်းဖက်မှုမှ Exposure အကြားအဆိုပါအစည်းအရုံး
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ပါ Music Videos ၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' စားသုံးမှုနှင့်သူတို့၏ sexting အပြုအမူ (2014) အကြားတွင်အဆိုပါအသင်း
လိင် drive ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-အယူအဆ, လိင်နှင့်အီတလီဆယ်ကျော်သက်တွင်အွန်လိုင်းသားကောင်မှထိတွေ့မှုများအကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့များ: နှုတ်နှင့်အမြင်အာရုံ sexting အပြုအမူတွေ၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍစုံစမ်းစစ်ဆေး
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (2019) မှ၎င်း၏ထူးခြားသော sensitivity ကို၏အစိတ်အပိုင်းများ
လိင်မှုဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၏မြစ်ဆုံပုံစံ - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားများနှင့်လျှောက်လွှာ (၂၀၂၀)
အကြီးတန်းက Secondary School တွင်ကျောင်းသားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, ရွယ်တူချင်းဖိအားများနှင့်နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်၏မြစ်ဆုံ, တိုင်ပင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု (2019)
မြီးကောင်ပေါက် '' ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာမှု၏ဒိုင်းနမစ်: တစ်ခြောက်လုံး-လှိုင်းငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှင့်ငုပ်လျှိုးနေလူတန်းစားမော်ဒယ်ချဉ်းကပ်မှု (2019)
Sangihe ကျွန်းစုရှိနှစ်နှစ် SMA ရှိကျောင်းသားများ၏အပြုအမူအပေါ်လူမှုမီဒီယာတွင် Pornomedia ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2)
ကလေးများနှင့်လူငယ်များ (2009) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုများ၏ပျက်ဆီး
မိသားစုအပေါ် compulsive ကျဘာအပြုအမူတွေ၏သက်ရောက်မှု (2003)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်မိသားစုအပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2006)
ကလေးများအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု။ ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်ကောလိပ် (အောက်တိုဘာလ 2015)
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက် The Impact: တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ချက် (2013)
ဆယ်ကျော်သက်နှင့်ပေါ်ထွက်လာသောအရွယ်ရောက်သူများ၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုသဘောထားနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လိင်မီဒီယာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စာပေကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း (2019)
ကောလိပ်အတွက်လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင်လိင် Scripts နဲ့ချိတ် Up ကိုအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2014)
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအတွက်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်တက် hooking (2015)
အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. ကျပုံစံယုံကြည်ချက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းနှင့်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (2011)
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ရှငျခဲ့အတွေ့အကြုံ: တစ်ဦးကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2016)
အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2006) အတွက်အရေးပါသောအခြေအနေတွင်ရှိပါသည်
Ibadan အတွက်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး၏အရေးပါသောပစ်မှတ်, နိုင်ဂျီးရီးယား (2016) အဖြစ်မီဒီယာ
လူငယ်အဘို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု (2008) ၏သဘောသဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်
ကာမန်အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်အပို / Pre-အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့် Associated အချက်များ, အီရန် (2019)
လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းမှ Exposure နှင့်ဆယ်ကျော်သက် Pre-အိမ်ထောင်ရေးကိုယ်ဝန် (2017) အကြားဆက်ဆံရေး
မကြာခဏညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု, အပြုအမူများနှင့်ဆွီဒင်အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (2017) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အဆက်မပြတ်အကြားဆက်ဆံရေး
Salatiga အတွက်နှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် Cybersexual စွဲအကြားဆက်ဆံရေး (2017)
Mass Media ကိုနှင့်လူမှုမီဒီယာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကြားဆက်ဆံရေး: တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2015)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအပေါ် Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အအတွေးအခေါ်ထိန်းချုပ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက်အခက်အခဲများ၏အခန်းက္ပ (2017)
လိင်ကအင်တာနက်မီဒီယာများနှင့်မလေးရှားမှာရှိတဲ့လိင်အတွေ့အကြုံပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အသုံးပြုမှု: တစ်အာမခံ (2018) အဖြစ်လိင်စေ့စေ့
ဟောင်ကောင်ရှိလူပျိုတို့ဖွငျ့ cyberpornography များအသုံးပြုမှုတချို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (2007)
အချိန်ကွဲပြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2015) တွေထဲမှာလိင်မှထုတ်ပြန်သောကျူးလွန်သူ
ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2018) မှတက္ကသိုလ် '' Ibadan ဘွဲ့ကြို၏ Exposure ၏လမ်းကြောင်း
မွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်ရေးဖို့ Access ကိုအမေရိကန်လူကြီးများ '' ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းခါနီးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်သဘောထားများကို ': တစ်ဦးကအမျိုးသား Panel ကိုလေ့လာမှု (2015)
နားလည်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက် (2018) ကြားတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ profile များကိုခန့်မှန်း
မလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်အသုံးပြုသူ (2007) ၏အမျိုးသားရေးနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ, ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားလူနေမှုပုံစံနှင့်ကျန်းမာရေး (2014) နဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်၎င်း၏အသင်း၏အသုံးပြုမှု
မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့ Self-အစီရင်ခံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအသုံးပြုခြင်း (2007)
မိသားစုအချက်များ (2018) ၏အခြေအနေတွင်အထက်တန်းကျောင်းသားများအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း
မြီးကောင်ပေါက် '' ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်း (2018): ဘာသာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံအမျိုးပေါင်း
ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသားများ (2015) ၏ကိုယ်စားလှယ်အသိုင်းအဝိုင်းကနမူနာများတွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု: ကလေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း
တစ်ဦးကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမှန်ဘီလူး (2019) မှတဆင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း
Autism Spectrum Disorders နှင့်အတူလူငယ်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်အကြမ်းဖက် Fantasy: အန္တရာယ်ရှိတဲ့သို့မဟုတ်ငွိုငွ Misfits? အဘယ်သူကိုကာကွယ်ပါရန်တာဝန်? (2015)
ဘယ်အချိန်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကောလိပ်အထီးများထဲတွင်ပြဿနာကိုကြည့်ရှုခြင်းသလဲ? အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား (2012) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ
ကို "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်" ကျော်ကြာသည့်အခါ - ကုသနှင့်ကုသမှုလက်ထောက်အညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနောက်ကွယ်ကအန္တရာယ်အချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ဦးကအရည်အသွေးလေ့လာမှု (2019)
ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ၏ X-rated ပစ္စည်းများနှင့်ကျူးလွန်: link တစ်ခုရှိပါသလော (2011)
တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2012) အဖြစ်သူတို့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု Young ကအရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများအစီရင်ခံစာများ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ (2017) နဲ့ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ Young ကသြစတြေးလျ '' အသုံးပြုမှု
လူငယ်များ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်တမ်း - အတည်ပြုခြင်း - ဗြိတိသျှရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမျိုးအစား (ဇန်နဝါရီ၊ ၂၀၂၀)
လူငယ်များ၊ လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောခေတ် (၂၀၂၀)
လူငယ်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ - ပျံ့နှံ့မှုနှင့်အနောက်မြောက်အီသီယိုးပီးယားတွင်လူမှု - လူ ဦး ရေအချိုးအစားအချက်များ - ရပ်ရွာအခြေပြုကဏ္ Cross ဆိုင်ရာလေ့လာမှု (၂၀၂၀)
(L) လေ့လာမှု - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည် 'အလွန်အမင်း' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလျှောက်ပြီးအကူအညီလိုကြသည်
(L) 1 ယောက်ျားလေးများအတွက်3မိုးသည်းထန်စွာ porn သုံးစွဲသူများကနေဒါလေ့လာမှုပြပွဲ (2007)
(L) 16 နှင့် 20 နှစ်ကြားယောက်ျားလေးတစ်ပဉ္စမ (2013) သူတို့ "စစ်မှန်သောလိင်များအတွက်လှုံ့ဆော်အဖြစ် porn အပေါ်မှီခို" ခဲ့ကြသည်အရှေ့လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကိုပြောသည်
(L ကို) အားလုံးယောက်ျား porn watch, သိပ္ပံပညာရှင်များကိုရှာဖွေ: ရှိမုနျကိုလူးဝစ် Lajeunesse, Ph.D, (2009)
လေ့လာမှုရန်အဆိုအရအောက်လိင်ရှိခြင်း (L) ကိုအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ (2015)
အင်တာနက်က porn (2012) စွဲဖြစ်လာ (L) ကလေးများ
(L) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်အမျိုးသမီးဦးနှောက်ပြောင်းလဲပါသလား? (2016)
(L) လုံးကျောင်းမှာတစ်နှစ်အုပ်စုများ porn မြင်ကြပြီ, သားသမီးရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (2013) ကပြောပါတယ်
(L) ကိုကျွမ်းကျင်သူများက: မိုဘိုင်း porn သြစတြေးလျကလေးတွေညံ့, ကလေးလိင်ရာဇဝတ်မှု (2016) ကားမောင်း
အမြိုးသမီးမြား၏အပျက်သဘောဆောင်သောအမြင်ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်ပျော့-Core porn စောင့်ကြည့်သူကို (L) လူတို့, အငြင်းပွားဖွယ်လေ့လာမှုတောင်းဆိုမှုများ (2016)
(L) ကိုအွန်လိုင်း porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ် (2016) သို့ကျောင်းကအသက်လေးတွေလှည့်
(L) ကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း NSW အတွက်လုလင်တို့သည်အားဖြင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုမှဦးဆောင်နေသည်, ရဲ (2014) လို့ပြော
(L) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ '' desensitising လူငယ်များ '(2016)
(L) အဘယ်ကြောင့် porn နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက် '' စွဲ 20 နှစ်အရွယ်သမီးကညာ၏မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြေးနန်း - ဗြိတိန်နိုင်ငံ။ (2014)